Lohataona famaranana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mgr Fulgence Rabemahafaly il y a 1 année
Maro no niteny fa tsy norenesina. Betsaka no nilaza fa tsy nohenoina. Soa ihany fa mbola misy tenin-dRaiamandreny… hoy Mgr Fulgence Rabemahafaly
Hanamarika izao fizaran-taona nialana tamin’ny ririnina izao, ny fanadinam-panjakana isan’ambaratongany, manomboka amin’ny CEPE. Toy izay ho lohataona fanomboham-pianarana, dia lasa famaranana, rahefa nihiboka nandritra ny antsasa-taona, tsy nampianarana fa nandraisan-karama ho an’ny sekoly sasany ; ny ankamaroan’ny sekoly tsy miankina kosa tena maharary teo amin’ny fiahiana ireo mpampianatra, satria tsy mba nahazo na dia tosika fameno aza.
Tao anatin’iny fihibohana iny nisy politika fanilikilihana hafahafa. Nanohina ny fo teny ambanivohitra teny ny mandre tabataba isan’andro fa hoe misy fizaràna raha maimaim-poana, eny an-tanàn-dehibe eny ka nitady lalana mba hahita karinem-pokontany eny, hahazoana raha. Maro ny mpanoro hevitra fa tsy nohenoina. Tsy fitaizana saim-bahoaka, fa toy ny efa fampielezan-kevitra indray no miverina, noho ny fizarana zavatra maimaim-poana. Tsy nety angaha izy io, hoy ny tso-piainana, raha nanaovana fihariana asa tana-maro, toy ny fanamboarana lalana mandalo ny tanàna maro izay tena simba, feno lavaka, nefa asa vitan’ny herin-tsandrim-pokonolona raha natao tana-maro : niantohana tosika sy vatsy, fa manaja ny elanelana iray metatra sy misasa tanana.
Soa ihany fa mbola misy tenin-dRaiamandreny mankahery ; vita raki-tsary sy feo (DVD) ireo fankalazana sy hafatra nafafiny. Rakitra soa sarobidy sy tantara masin’ny firenentsika iny ka misaotra anareo ekipan’ny serasera ao amin’ny RDB namokatra azy sy nanapariaka azy eran’ny diosezy 22, ho soa iombonan’ny firenena manontolo, ho anatra.
Ny sabotsy 7 septambra 2019 no namafazan’ny Papa anatranatra voalohany, teny amin’ny Lapam-panjakana teny Iavoloha, Nantitranteriny, ary naveriny in-2 ny teny hoe “fihavanana”, izay noderainy fa harem-panahy malagasy vitsy mpanana, mahay mifampizara sy miray hina, ary tsy mifanilikilika. Voafehin’izany teny izany koa ny fifandrohizan’ny mpianakavy sy ny fifankatiavana eo amin’ny manan’aina sy ny zavaboary. Rahefa mihaino indray ny teny nafafiny isika, dia mety ho velon-tsento hoe : « Tahak’izay nihaino izay nolazainy » dia mba ho lohataona fihavanana izao volana septambra, tsingerintaona namangiany antsika izao.
HAFATRY NY FEM : “Ny Fanahy Fahamarinana no hitari-dalana anareo amin’ny marina rehetra” (Jo 13, 20) - il y a 8 mois